Inqaba kutholwa: I-EFF ethubeni - Bayede News
Inqaba kutholwa: I-EFF ethubeni
KULE minyaka emine eyedlule bekukhona okungajwayelekile kupolitiki yaseNingizimu Afrika. Iqembu elinamaphesenti amancane kanye nelimelwe ngabantu abanga-25 kuphela yilo ebelinomsndo ukwedlula iqembu elikhulu kwaphikiswayo. Leli qembu ebelenza okungejwayelekile yi-Economic Freedom Fighters (EFF) eholwa nguMnu uJulius Malema. Ngokwemiphumela yokhetho lwakamuva kuzwelonke leli qembu lavotelwa ngabantu abayisi-1,169,259. Lokhu kungahumushwa ngokuthi lathola 6.35% nokwenza libe yiqembu lesithathu ngobukhulu. Yize ngowezi– 2014 kwabe kuwukhetho lokuqala leli qembu kuzwelonke lazithola izihlalo naseziShayamthetho zezifundazwe : KwaZulu- Natal zaba zi-2, eGauteng zaba yisi-8, eLimpopo zaba yisi-6, kwathi eMpumalanga zaba zi-2, eWestern Cape saba si-1, eFree State khona zaba zi-2, nase- Eastern Cape zaba zi-2.
Uma kuqhathaniswa izinombolo zaleli qembu kanye nezalelo elibusayo i-African National Congress (ANC) yona eyathola abavoti abayizi-11,436,921, okungama- 62.15% okwabe kuyinika izihlalo ezingama – 249, abe- EFF besele kude le. Yisithombe esifanayo uma ubaqhathanisa neqembu elikhulu kwaphikisayo i-Democratic Alliance (DA) yona eyabuya nabavoti abayizi-4,091,584, nokwabe kusho ama- 22.23% noma izihlalo ezingama-89.
Yize bekukhona ukugxeka okuthi leli qembu libukeka linobuso obubodwa kuzwelonke. Lokhu bekushiwo ngoba cishe kuzo zonke izinto kuphawula abaholi bakazwelonke nasezintweni ezenzeka komasipala. Kule minyaka emine liphumelele ukubanga umsindo owenza liqapheleke. Yize sekushabalala kepha abezindaba bayaqhubeka nokudla esandleni saleli qembu. Ukuthutheleka kwabo uma kunezithangami kwedlula okwenzeka uma kunesithangami seDA noma Inkatha Freedom Party (IFP). Ngisho osomaqhinga bamazwe bakuleli bacijisa amadlebe nxa ubuholi baleli qembu buphefumula.
Ukuba yisishingishane esinyakazise iPhalamende kanye nohulumeni kulilekelele ekuzakheleni igama ngaphandle kokuchitha imali. Ngesinwe beliqhuba umkhankaso walo ezinkundleni zokuxhumana ukwedlula wonke amaqembu asephalamende. Isizindalwebu salo nezinye izinkundla zokuxhumana bekulandelwa cishe yibo bonke abemithombo yabezindaba.
Kepha inkundla abayiqoka njengaleyo lapho bezogqama khona kwaba yiPhalamende. Baqoma usuku lapho uMengameli wezwe ethula inkulumongqangi yakhe nokuyilapho wonke amehlo omhlaba asuke ethe njo kwelakuleli. Umkhankaso ofana ne#PayBack the Money waba wubuhlakani obumangalisayo. Phela lesi siqubulo sagcina singesawo wonke umuntu owabe ethi uMengameli wangaleso sikhathi uZuma akakhokhe imali. Ngisho i-DA yazithola isisho lokhu ngoba njalo belu i-EFF yabe iwuhlele ngesinwe lo mkhankaso.
Kuyimanje leli qembu lizishaya isifuba ngokuthi uphandle nje uZuma yilo elayihlaba inxeba eyakwaDakw’udunuse baze bayigojela. Akugcinanga lapho, amacala ebeliba yingxenye yawo eNkantolo yoMthethosisekelo abeyenza ikhange kwabaningi. Ulimi lwayo nxa kufikwa kwezomnotho kanye nenhlalo lokhu okuthinta kakhulu aboHlanga bekwenza libe ngundabamlonyeni. Inkulumo yalo nanamuhla iqhakambisa intsha nokuyiyo eningi kukho konke. Sikhulu isibalo sentsha engasebenzi, engenayo imali yokufunda. Ngakolunye uhlangothi siphakeme nesibalo sentsha engabavoti.
Kupolitiki amaqembu kawaphumeleli ngabavoti kuphela kepha nehlanhla yokuzalwa umbethe iba nomthelela. Kule minyaka emine eyedlule kalikho iqembu elikhombise ukukhanyelwa wumsamo njenge EFF. Kusuka esibhicongweni saseMarikana lapho amaphoyisa acekela phansi ngenhlamvu abasebenzi boHlanga kuya odabeni lomhlaba izinto zibukeka zivuna iqembu le-EFF.
Izinhloso zokudondolozela nokuqhakambisa umuga waseMarikana zaqala ukubonakala ngesikhathi leli qembu linquma ukuyothula ngokusemthethweni inhlangano kule ndawo. Inhloso lapha yabe ingeyona imfihlo. Kwabe kuwukwethula iqembu elisha endaweni evele isematheni kubantu nakwabezindaba. Okwesibili kwabe kuwukuninda i-ANC njengeqembu nohulumeni owenza okufanayo nalokho okwenziwa ngamadlagusha ngonyaka we-1960 eSharpville nakwaLanga.
Khona lapho ukuyokwethula le nhlangano eMarikana kwabe kunehloso yokuyenza ihlale isemqondweni nasemlandweni waboHlanga baseNingizimu Afrika njengoba kwakunjalo ukwethulwa kwe-ANC eMangaung ngowe-1912. Yenza njalo nePan Africanist Congress ( PAC) kaSobukwe ehholo lase- Orlando East. NakwaNzimela kwaba njalo ku-Inkatha Freedom Party (IFP). Namuhla kuze kube ngunaphakade ngeke ukhulume ngeMarikana ungakhulumanga nge-EFF.
Ukuzisondelanisa kobuholi be-EFF nemindeni yalabo abasala enkundleni eMarikana kwenze le nhlangano yaba ngubuso babo kanjalo nenhlangano ebukeka inendaba nabo. Ngakolunye uhlangothi izimbangi ezinkulu ze-EFF okuyi-ANC zona zabukeka zingasohlangothini lukahulumeni owaba yimbangela yokufa kwabantu. Kule minyaka emihlanu kuqhubeka uphenyo ngalokho okwenzeka, i-EFF iphumelele ukunyundela i-ANC negcine isiqhelile nasezinhlelweni zesikhumbuzo sesigameko saseMarikana kusuka ngowezi-2013. Akulona ihaba ukuthi i-EFF iphumelele ekubekeni i-ANC ‘njengesitha’ engxenyeni ethize yabantu baseMarikana ikakhulukazi izisebenzi, imindeni kanye nezihlobo zalabo ababulawa nalabo abalimala ngosuku lwesibhicongo.
Ngakolunye uhlangothi i-EFF iphumelele ukuzibeka ‘njengabavikeli nabakhulumeli’ beMarikana. Ephawula emuva kokuphuma kombiko weKhomishini kaFarlam eyabiphenya ngokwenzeka, umholi we-EFF uMhlonishwa uJulius Malema wazwakalisa ukungenami kwakhe ngemiphumela yophenyo.
“Ngimangele futhi ngiphoxekile. Kimi lokhu kufana nephupho elibi nengethemba ukuthi kukhona osazongivusa ngoba kangikholwa ukuthi lokhu kwenzeka kubantu abampofu. Lolu wusuku olubi kudemocracy yethu, imicabango yami isemindenini yalabo abafayo.” Akagcinanga lapho uMalema ngoba wabe esebophezela iqembu lakhe ekuthini lizoqinisekisa ukuthi labo abasemandleni bazojeza ngalokhu okwenzeka eMarikana.
Odabeni lomhlaba inyoni yanyela esandleni impela ngoba nanamuhla uma kukhulunywa ngalo yize laqalwa ngabanye ngeminye iminyaka isithombe esakhekile yiso leso sokuthi njengaseMarikana nasodabeni lomhlaba i-EFF iyimpendulo. Kukhona inkolelo ethi lokhu kwenze iqembu elibusayo nalelo elikhulu kwaphikisayo iDA benza amaphutha kwelomhlaba. IsiZulu sithi, ‘yakhela ngamaqubu enye’ njengoba nayo i-EFF yakhe udumo nophawu lokuba yiqembu elingumvikeli womhlaba. Kuyiwa okhethweni nje yilo udaba oluzobe lungingizisa abahlonushwa. Kulindeleke ukuthi udaba lomhlaba nokubuyiselwa kwawo kwaboHlanga, kube yilo olwenza yehluke. Lapho i-ANC neDA bengingiza, i-EFF izoqojamisa ukukhuluma nokungahle kuzwakale kahle kubantu abakwazisayo ubumqoka bomhlaba.
Kukhona okunye okwenzeka nokwachoma uphaphe lwegwalagwala kuleli qembu. Kwakungesikhathi iqembu lidla imikhandlu ethize emanyuvesi ahlukene kuleli. Lokhu kwamangaza izimbangi kwazise uphiko lwayo lwabafundi i-EFF Student Command lwabe lulusha kulezi zikhungo zemfundo kuleli. Nalapha lagidelwa yidlozi njengoba lazithela phezu kwenkanakana yezinfuno okwakukhona kuzo esemfumdo yamahhala. Kwabanye kunenkolelo yokuthi ezinye zeziqubu zodlame nendlakadla kwezinye zezikhungo zabe zingenxa yesandla salolu phiko. Abaholi balo baziphika izinkulumo ezabe zikhomba ngakubo. Yize kunjalo ukufika kwalo kwadala uguquko ekwenzakaleni kwezinto.
Bayede News Jan 31, 2019